Kismaayo News » Wafti dawladda uga qayb galaya aaska Suldan Cabdi oo gaaray Kismaayo
Wafti dawladda uga qayb galaya aaska Suldan Cabdi oo gaaray Kismaayo
Kn:Magaalada Kismaayo waxaa soo gaaray wafti ka kooban 35 xubnood oo uu hogaaminaayo wasiirka warfaafinta, Boostada iyo Isgaarsiinta, Gaadiidka cirka iyo dhulka Cabdullahi Cilmooge Xirsi.
Waftigan oo Kismaayo u yimid inay ka qayb galaan aaska qaran ee loo samaynaayo Allaha u naxariistee Suldaan Cabdi Suldaan Cali Sonkor ayaa waxay ka koobanyihiin, Xildhibaano, culimo awdiin uu hormuud u yahay Sh. Nuur Baaruud Gurxan, Saraakiil ciidan iyo agaasimayaal ay ku jiraan, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, agaasimaha xafiiska wasiirka iyo agaasimaha shaqada iyo shaqaalaha.
Meydka Suldaanka ayaa la sugayaa in baritoole oo sabti ah la soo gaarsiiyo magaalada Kismaayo, ayadoo ay soo galbin doonaan dhawr diyaaradood oo ay la socdaan wafuud isugu jirta madaxdawladeed, culimo, odayaal dhaqameed, siyaasiyiin iyo ganacsato.
Amaanka magaalada Kismaayo ayaa la adkeeyay, waxayna ciidamadu ku jiraan feejignaan dheeri ah iyo heegankii ugu danbeeyay ee ay ku sugayaan masuuliyiinta iyo dadka muctarifka ah ee isugu imaanaya Aaska Allaha u naxariistee Suldaan Cabdi Suldaan Cali Sonkor.